“လိုင်းပေါ်တင်ပြီး ချပြလို့မရလို့ ကိုယ်လှူခဲ့ တာတွေ အားလုံးကို တနေ့ တို့တွေ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျမှ ဂုဏ်ယူပြီး ဖော်ပြပါမယ်” လို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင် – Cele Snap
“လိုင်းပေါ်တင်ပြီး ချပြလို့မရလို့ ကိုယ်လှူခဲ့ တာတွေ အားလုံးကို တနေ့ တို့တွေ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျမှ ဂုဏ်ယူပြီး ဖော်ပြပါမယ်” လို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်
June 25, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောတဈဦးဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီး ပိုးကွာဖွူခငျကတော့ MRTV-4 ဇာတျလမျးတှဲတှေ ရိုကျကူးရာကနေ အောငျမွငျ ကြျောကွားလာတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ သူမကို လူသိမြားလာစတောကတော့ ဆိုငျးမိုငျဆိုတဲ့ ဇာတျရုပျနဲ့ ပရိသတျအခဈြတှေ အခိုငျအမာရရှိကာ တဈခဲနကျအောငျမွငျမှုတှေ ရရှိခဲ့တာပဲ ဖွဈပါ တယျ။
ပရိသတျတှေ နဲ့ အလုပျအပျေါမှာလညျး လေးစားတဲ့ သူမက မိဘကိုရှာဖှေ ကြှေးမှေးပွုစုနတေဲ့ သမီး အလိမ်မာလေး တဈယောကျလညျးဖွဈပါ တယျ။
ပိုးကွာဖွူခငျကတော့ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေမှော တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနေ ပွညျသူတှအေတှကျ အလှူလေးတှေ မကွာခဏဆိုသလို ပွုလုပျနတောကို ပရိသတျတှေ မွငျတှကွေ့ရမှာပါ။ နညျးသညျမြားသညျ ဖွဈစေ ခုလိုအခြိနျမှာ ပေးကမျးဝမြှေခွငျးကလညျး မှနျမွတျလှပါ တယျ။
ယခုလညျးသူမက အလှူတှေ ဆကျလကျလုပျနတောဖွဈပွီး သူမလှူခဲ့တာတှကေို လူမှုကှနျယကျပျေါတငျပွီး ခပြွလို့ မရ တာတှကေို တနေ့ အောငျမွငျမှုရရှိသှားတော့မှသာ ဂုဏျယူပွီး ဖျောပွမယျလို့ ဆို ပါတယျ။ ပိုးကွာဖွူခငျ ရေးသား ထားတာလေးက တော့….
“လိုငျးပျေါတငျပွီး ခပြွလို့မရခဲ့တဲ့ ကိုယျပါဝငျခဲ့တာတှေ ကိုယျလှူခဲ့ ထောကျပံ့ပေးခဲ့တာတှေ အားလုံးကို တနေ့ တို့တှေ အောငျမွငျသှားတဲ့အခါကမြှ ဂုဏျယူပွီး ဖျောပွပါမယျ အမြားအကြိုးအတှကျ အနဈနာခံ စှနျ့လှတျကွိုးစားပေးခဲ့ကွသူမြားကို အစဉျလေးစားလြှကျ ….” ဆိုပွီး သူမရဲ့ Facebook စာမကျြနှာမှာ ပိုဈ့တငျလာတာလေးကို Rangoon Times ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျ။ ဖတျရှု့တဲ့ ပရိတျသတျ အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပွီး ကနျြးမာ၍ ဘေးကငျးကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျ ပါတယျ။
Na Nge (Rangoon Times)
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူးရာကနေ အောင်မြင် ကျော်ကြားလာတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို လူသိများလာစေတာကတော့ ဆိုင်းမိုင်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပရိသတ်အချစ်တွေ အခိုင်အမာရရှိကာ တစ်ခဲနက်အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ပရိသတ်တွေ နဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာလည်း လေးစားတဲ့ သူမက မိဘကိုရှာဖွေ ကျွေးမွေးပြုစုနေတဲ့ သမီး အလိမ္မာလေး တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါ တယ်။
ပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ ပြည်သူတွေအတွက် အလှူလေးတွေ မကြာခဏဆိုသလို ပြုလုပ်နေတာကို ပရိသတ်တွေ မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ နည်းသည်များသည် ဖြစ်စေ ခုလိုအချိန်မှာ ပေးကမ်းဝေမျှခြင်းကလည်း မွန်မြတ်လှပါ တယ်။
ယခုလည်းသူမက အလှူတွေ ဆက်လက်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး သူမလှူခဲ့တာတွေကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တင်ပြီး ချပြလို့ မရ တာတွေကို တနေ့ အောင်မြင်မှုရရှိသွားတော့မှသာ ဂုဏ်ယူပြီး ဖော်ပြမယ်လို့ ဆို ပါတယ်။ ပိုးကြာဖြူခင် ရေးသား ထားတာလေးက တော့….
“လိုင်းပေါ်တင်ပြီး ချပြလို့မရခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပါဝင်ခဲ့တာတွေ ကိုယ်လှူခဲ့ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာတွေ အားလုံးကို တနေ့ တို့တွေ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျမှ ဂုဏ်ယူပြီး ဖော်ပြပါမယ် အများအကျိုးအတွက် အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်ကြိုးစားပေးခဲ့ကြသူများကို အစဉ်လေးစားလျှက် ….” ဆိုပြီး သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ပိုစ့်တင်လာတာလေးကို Rangoon Times ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှု့တဲ့ ပရိတ်သတ် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပြီး ကျန်းမာ၍ ဘေးကင်းကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် အသစ်ဆောက်လုပ်နေတဲ့ ဂေဟာအသစ်လေး မကြာခင် ပြီးစီးတော့မှာမလို့ ၀မ်းသာနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ